Noravàna ny antenimiera armeniàna mba hanomànana ny fifidianana amin’ny Jona · Global Voices teny Malagasy
Tsy vitan'ny parlemanta ny nanolotra praiminisitra, takiana ny hisian'ny fifidianana haingana
Voadika ny 19 Mey 2021 13:25 GMT
Mehr News Agency nampiasàna ny Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media. Dika nokiraina no averin'ny avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Ny mpanohitra, na ny ao anatin'ny antenimiera na ny ety ivelany, dia niampanga an'i Pashinyan ho tsy nahay nitantana taloha, nandritra ary taorian'ny faharesean'ny firenena tamin'ilay Ady Fanindroany tao Nagorno-Karabakh. Taorian'ilay fifanarahana tamin'i Rosia nitarika ho amin'ny fampitsaharana ny ady, an'arivony maro ireo mpanao hetsipanoherana no nivoaka an-dalambe nitaky ny hisintahan'i Pashinyan.
Famoriana olona nifanindran-dàlana tamin'ny fety fanambaràna ny “Armenia Alliance” an'i Kocharyan, niarahana tamin'ny antoko “Armenian Revolutionary Federation (ARF)” – Federation Revôlisiônera Armeniàna – sy ny “Rebirth Armenia” – Fahateraham-baovao ao Armenia .
Ampangaina ihany koa i Kocharyan tamin'ny nanekeny kolikoly mitetina 3 tapitrisa dolara eo ho eo; mbola amperiny izay fitsaràna izay.